Time Core Messages M26 Grade 1 X | Wordworks
Play & Learn Activities
Wordworks Mobile Phone App
TIME IBakala 1
Uqhube kakuhle! Wena ungowenani kumawakawaka eentsapho asebenzisa inkqubo yokufunda ekhaya, iTIME. Sikuvuyele kakhulu ukuhamba olu hambo kunye nawe kwaye sinethemba lokuba siza kuphinda sikubone kwinkqubo yeTIME yebanga loku-1 ngomnyaka wama-2022!
Click below to listen to text
Abazali basichazele ukuba izixhobo zokufunda zeTIME zibancede kakhulu batsho bafumane ixesha lokusondelelana nabantwana babo. “Ezi pekhi zisinceda ukuba sibe nexesha elizolileyo kunye nabantwana bethu,” utshilo omnye wabazali. “Siyabulela kakhulu kwiTIME, nditsho ndamazi ngcono umntwana wam.”
Izixhobo zeTIME zincedise ekwakheni umntwana owonwabileyo, ozithembe kakhulu nokwazi ngcono ngoku ukumilisela ingqondo yakhe kwinto ayenzayo.
Omnye umzali uthe, “Ngoku umntwana wam undamkela ngokundinika umsebenzi wakhe wesikolo ekumele awenze, xa ndifika ekhaya ndivela emsebenzini. Uyakwazi ngoku ukuyilandela kakuhle imiyalelo. Uyancokola kakhulu kunakuqala, uyadlala kwaye ukhululekile.”
Siyathemba ukuba inkqubo yeTIME ikuncedile nawe kwaye singavuya xa sinokukhe sive kuwe malunga nayo. Khululeka, ungoyiki ukwabelana nathi ngeengcinga zakho malunga nale nkqubo kwicandlelo leTIME, elikwiwebhusayithi yethu yakwaWordworks.
Asinayo ke le nkqubo kwiBanga lesi-2, kodwa ke ungaphinda ujonge ezaa pekhi zonyaka wama-2021 uze uphinde wenze eminye yemisebenzi kunye nomntwana wakho. Kuluncedo kakhulu ukuphindaphinda xa kufundwa!
Cofa apha ukuze ufumane imiyalezo edlulileyo
All Rights Reserved Wordworks